चितवनमा ब्यापारीले भारतीय गोलभेंडा फाल्नु कतिको उचित- बिनोद त्रिपाठी – Janamukhi.com
साना तर महत्वपुर्ण कुरा गरौं ।।। आज चितवनमा केहि ब्यापारीले भारतीय गोलभेंडा फालेछन् । पहिले पनि भारतीय केरा आयातको यसरी नै बिरोध हुँदै आएको थियो । भारतबाट कृषिजन्य उत्पादन रोक लगाउन नेपाली कृषकले धेरै पहिले प्रयास गरे । त्यसको असर यहाँ काठमाडौं सहित देशका प्रमुख शहरमा कसरी परेको छ, सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । रोक लगाएर मात्र हुन्छ, स्वदेशी उत्पादन कुन स्तरबाट भएको छ, ख्याल गर्नुपर्देन ? यो कार्यले उपभोक्ता कति मारमा छन्, यतातिर आम उपभोक्ताले सोचौं ।
१, भारतको उत्तरप्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल राज्यका बिभिन्न क्षेत्रबाट नेपालमा कृषि उत्पादन आउँछ । अहिले त्यहांका धेरै जिल्लामा तरकारीमा बिषादिको प्रयोगमा पुर्ण प्रतिबन्ध छ । हाम्रो उत्पादन भन्दा भारतीय तरकारी स्वादिलो मात्र होइन, स्वस्थ पनि छ ।
२, नेपाली केरा ब्यबसायीले पुरा अबधी केरा नपाक्दै काटेर जर्बजस्ती बिषादीले पकाएर बजारमा पठाउँछन् । हेर्नुस नेपाली केरा बजारको अबस्था । तर, भारतीय केरा पुरा अबधी भएको धेरै राम्रो, स्वस्थ र सस्तो हुन्छ ।
३, साग, बोडी, फापर, पालुङो, सिमी लगायतका तरकारीमा प्रत्यक्ष माथिबाट बिष हालिन्छ । कांक्रो, लौका लगायतका बिमौसमी फलफुल तरकारी बिषादिको मात्र आधारमा उत्पादन गरिन्छ । त्यति मात्र होइन, जमिन भित्र फल्ने आलु, पिंडालुमा समेत माटोमा बिषादि प्रयोग गरेर फलाईन्छ । यो रोक्ने कस्ले ? यसले हामी कति बिष खाईरहेका छौं, सरकारले रोक्न पर्देन ? तर, भारतीय तरकारीमा बिषादि प्रयोग अहिले करिब करिब प्रतिबन्ध लागिसकेको छ ।
४, बिषादि प्रयोगले उत्पादन मात्र बढ्ने हो । तर, स्वास्थ्यलाई उति नै हानीकारक हुन्छ । जस्ले गर्दा हरेक मानिसमा टाउको दुख्ने रोगको समस्या बढेको बेला बेलामा चिकित्सकले बताउँदै आएका छन् ।
५, भारत सरकारले हरेक कृषकलाई अनुदान दिएको छ । मल, वीउ लगायतमा भारत सरकारले ५ बर्षदेखि अनुदान र नोक्सान हुँदा क्षतिपुर्ति दिने भएकोले अधिकाश कृषक अर्गानिक उत्पादनमा लागेका छन् । नेपालमा आउने अधिकांश तरकारी फलफुल क्यारेन्टाइन चेकजांचबाट आउने भएकोले भारतीय कृषि उत्पादन स्वस्थ छ ।
६, बिश्वमा सबैभन्दा अर्गानिक तरकारी फलफुल उत्पादन गर्ने देश फिनल्याण्ड हो । किनकी त्यहाँ कृषकको सम्पुर्ण खर्च सरकारले ब्यहोर्छ । त्यहि भएर कृषकलाई नाफा गर्न हानथाप गरेर छलछाम गर्न आबस्कता पर्देन । नाफा भए कृषकलाई हुन्छ । घाटा भए सरकारले ब्यहोर्छ ।
७, दक्षिण एशियामा तरकारी फलफुलमा बिषादि प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो देश भुटान हो । भारतले २९ वटा राज्य मध्ये २२ वटालाई पुर्ण बिषादी प्रतिबन्ध लगाएको छ । केहि स्थानमा अझै लुकिछिपी बिषादी प्रयोग भएपनि दिल्ली लगायतका ठुला शहरमा पछिल्लो ३ बर्षदेखि बिषादी फलफुल तरकारी बेच्न पाईदैन ।
८, बिश्वमा सर्बाधिक बिषादी प्रयोग गर्ने मुलुक सुडान, इथियोपिया, हैटी, बंगालादेश र क्यमरुन हुन् । यी देशमा बिषादीकै कारण हरेक बर्ष हजारौं मानिसको अकालमा मृत्यु हुँदै आएको छ ।
९, बिषादी रोक्न सरकारले कृषकलाई अनुदान दिनुपर्छ । नोक्सान सरकारले नै ब्यहोर्नुपर्छ । नेपाली कृषकले बिषादीरहित कृषिजन्य उत्पादन नगर्दा सम्म भारतबाट आउने सामग्री रोक्न हुँदैन । यसले करिब ३ करोड जनतालाई मृत्युको मुखमा पुर्याउनेछ । खुल्ला बजारमा अन्तरदेशिय ब्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन । फेरि, हाम्रो उत्पादन नै स्वास्थ्यका लागि हानीकारक भएपछि आयात होस वा निर्यात रोक्नु हुँदैन ।
१०, यसको मतलब नेपाली कृषकको बिरोध होइन । भारतको सपोर्ट पनि होइन । नेपाल सरकारको दायीत्वलाई घच्घच्याएको हो । कृषकलाई जिम्मेवारी बनाएको हो । माथि उल्लेखित कुराहरु पुरा हुने बित्तिकै कृषकहरु अझ ब्यबसायीक र धनी हुनेछन् । नेपाली जनता स्वस्थ्य हुनेछन् ।
( लेखक सौर्य दैनिकका सम्पादक हुन् । यो सामाग्रि उनको फेसबुक पेज बाट लिईएको हो । )
बंगलादेश प्रिमियर लिगमा सन्दिपको टोलिले आज दोस्रो खेल खेल्दै